Baarlamaanka Puntland oo ansixiyay ajandaha kalfadhigooda 45-aad - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandBaarlamaanka Puntland oo ansixiyay ajandaha kalfadhigooda 45-aad
October 28, 2019 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Golaha baarlamaanka dowladda Puntland ayaa maanta oo Isniin ah ansixiyay ajandaha kalfadhiga 45-aad.
Qodobada ugu waa weyn ee ajandaha ayaa waxaa kamid ah ansixinta miisaaniyada 2020, ansixinta guddiga kumeelgaarka ah ee doorashooyinka Puntland, heshiisyada xukuumadu gashay iyo kuwii hore dabagalkooda, la xisaabtanka xukuumada, iyo xeerarka ay xukuumadu soo gudbiso.
Kalfadhiga 45-aad ee baarlamaanka Puntland ayaa Sabtidii waxaa si rasmi ah u furay madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni.
Beledweyne-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta oo Isniin ah tagay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan, sida ay sheegeen masuuliyiinta dowladda. Ujeedka safarka Madaxweynaha ee Beledweyne ayaa ah sidii uu arki [...]